To become Hi-so Driver
ပစ္စည်းပို့ ရန်မှတ်ပုံတင်ပါ။ Hi-So Driverအခုပဲလုပ်လိုက်ပါ
ပို့ ချင်တဲ့ ပစ္စည်းကိုအခုပဲ ပို့ လိုက်ပါHi-So အမြန်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး
Hi-So Driver လုပ်မယ်
အစကနေ အဆုံးအထိ၊ သင်ယုံကြည်နိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှု
သင့်ရဲ့ ပစ္စည်းပို့ ဆောင်မှုကို အခုချက်ချင်းစတင်လိုက်ပါ။
ကျွမ်းကျင်သေချာတဲ့ သူနဲ့ ပစ္စည်းပို့ ရချင်တာလား? အခုချက်ချင်းလား?
မြို့ ထဲကို ထုံးလိုမွှေ၊ ရေလိုနှောက် သွားတတ်ရုံတင်မကပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ ဟာ လူကြီးမင်း ရဲ့ ပစ္စည်းကို ဂရုတစိုက်၊ အပြုံးလေးနဲ့ ပို့ ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ပို့ ဆောင်သူများဟာ ယဉ်ကျေးတဲ့ အပြင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ဆန် အလုပ် ပြီးမြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ သဘောပေါက် ကြပါတယ်။ သင့်ပို့ ချင်တဲ့ပစ္စည်းကို မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်း လိုရာရောက်အောက် ပို့ ဆောင်ပေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုချက်ချင်း ပို့ ဆောင်ပေးမယ်
Hi-So အသုံးပြု သူများ ဟာ Hi-So ပို့ ဆောင်သူ ယာဉ်မောင်း များ ဘယ်ရောက်နေပြီဆိုတာကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီသိရှိနိင်တဲ့ အပြင် အခုလို ပို့ ဆောင်ပေးဖို့ ကိုလည်း ခလုတ်လေးတစ်ချက် နှိပ်ရုံနဲ့ လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ “ဟုတ်ကဲ့ Delivery ကတော့ နောက်သုံးရက်နေရင် ပို့ ပေးပါလိမ့်မယ်” ဆိုတဲ့ စိတ်ပျက်စရာစကားကို နားထောင်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ သင်အခုလိုချင်ရင် အခုပို့ ပေးပါမယ်။
အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ခြေရာခံနိုင်မှု
Hi-So အပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင့် ပစ္စည်းကိုသယ်ဆောင်နေတဲ့ Hi-So ပစ္စည်းပို့ ဆောင်သူရဲ့ နာမည်နဲ့ ဓာတ်ပုံကို သင် သိရမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် သင့်ရဲ့ ပစ္စည်း အခုလက်ရှိဘယ်နေရာရောက်နေပြီဆိုတာကိုပါသိရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Hi-So ပစ္စည်းပို့ ဆောင်သူတို့အတွက် အကဲဖြတ်သတ်မှတ်မှုများ
Hi-So ပစ္စည်းပို့ ဆောင်သူများကို အကဲဖြတ် သတ်မှတ်ချက်များပေးနိုင်တဲ့ အတွက် အကယ်၍ Hi-So ပစ္စည်းပို့ ဆောင်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင့်စိတ်တိုင်းမကျခဲ့သော် Hi-So ဘက်မှ သိရှိနိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အရေးယူမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ အတူပဲ Hi-So ပစ္စည်းပို့ ဆောင်သူယာဉ်မောင်းများမှလည်း အသုံးပြုသူ များကို ပြန်လည် အကဲဖြတ် သတ်မှတ်ချက်များ ပေးနိုင် ပါတယ်။ လူသားအချင်း ချင်း အပြန်အလှန် လေးစားအသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လို့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့Hi-So ပစ္စည်းပို့ ဆောင်သူယာဉ်မောင်းများကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံပေးပါ။ :)
ကျွန်တော်တို့ အမြန်ဆုံး နှုန်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။
ခလုတ်လေးတစ်ချက် နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ သင်ပို့ ဆောင်လိုတဲ့ ပစ္စည်းများကို ချက်ချင်းပို့ ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ဘယ်လောက်ကျသင့်တယ်ဆိုတာလဲ ချက်ချင်းသိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခန့် မှန်းပစ္စည်းပို့ ဆောင်ခ
သင့်ရဲ့ လက်တစ်ဖျား မှာ ရှိတဲ့ ကြယ်ငါးပွင့် ထိုက်တန်တဲ့ ပစ္စည်းပို့ ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ
စက်ဘီး နဲ့ ပစ္စည်းပို့ ဆောင်ပေးမယ့် သင့်တင့်မျှတတဲ့ ဈေးနှုန်း နဲ့အံ့သြဖွယ်ရာ ၀န်ဆောင်မှု။ မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ မော်တော်ယာဉ်၊ ဗင်ကား၊ ကုန်တင်ယာဉ်များနှင့်ပါ ၀န်ဆောင်မှုပေးမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မျှော်လင့်စောင့်စား ကြပါဦးခင်ဗျာ။
© Copyright 2018 @ Htun Khaing International Co.,Ltd.